အဖော်စောင်ထားစို့(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဖော်စောင်ထားစို့(၁)
Posted by cobra on Sep 1, 2011 in Creative Writing | 25 comments
အဲဒါသုံးရင်သူနဲ့မနေနဲ့တဲ့ကြည့်ပါဦးဗျာ…..ဘယ်လိုမိန်ကလေးပါလိမ့်။ဒီနေ့ မှတွေ့ တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသန့်လားမသိ
ဘုရားရေ…..ဟိုကောင်ကယုံရရဲ့ လား၊မယုံရဘူးလားတော့သူ မစဉ်းစားပဲနဲ့ 
oakar min maung has written 203 post in this Website..
View all posts by cobra →
အင်း…. ၀င်ရောက် ဖတ်ရှု သွားပါကြောင်း…
ကောင်းပါတယ် ။ တင်ထားတာလေး ။ ဗဟုသုတပေါ့ ။ ဒါမျိုးတွေက တစ်ကယ်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလဲ မြင်ဖူးပါတယ် ကြားဖူးပါတယ် ။ ရှောင်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် မရှောင်နိုင်တော့တဲ့အခါတွေမှာ အဖေါ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။ အဖေါ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကျန်းမာရေးအတွက် အိပ်ကပ်ထဲမှာအမြဲရှိနေသင့်ပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်းကိုစောင့်မျှော်နေပါ့မယ် ။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကွန်းဒုံးကို မြန်မာ့ လူမှုဝန်းကျင် မှာလက်ခံဖို့ လိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသဘောရကြပါလဲ။
ယုံကြည်စိတ်ချ၊ အဖော်နဲ့မှ…သာယာလှပ စိုပြေသွား…။
ခုလိုမျိုးတွေ့ ရကြားရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ။သားဆက်ခြားပညာပေးရေးမှာလဲ ကွန်ဒုံးက အသုံးဝင်တယ်လေ။သတိဆိုတာပိုတယ်ကိုမရှိပါဘူး။
တဏှာရာဂစိတ် ပြင်းပြနေချိန် အသိဥာဏ် မဲ့တတ်ပါတယ် .. အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ သောက်စား မူးယစ်နေချိန်မှာပေါ့ …။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရအောင် အသိနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကာကွယ်သင့်တာပါ … ။ ပိုးဆိုတာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တာမို့ … ဘယ်လောက် အပြင်ပန်းလှလှ ပိုးရှိမရှိမသိနိုင်မပါဘူး .. တဒင်္ဂမှားတာနဲ့ တသက်လုံး ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ် … လူငယ်တွေ ဆင်ခြင်ကြပါ … ။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် … lip kiss ကနေ ကူးနိုင်ပါသတဲ့လေ …။
လေးလုံးရောဂါ အဓိကက သွေးနဲ့ လိင်အင်္ဂါက ထွက်တဲ့ အရည်တွေမှာ ပါတဲ့ ပိုးက ကူးတာမို့လို့ .. သွားပွတ်တံတွေကြောင့် … သွားဖုံးတွေ စုတ်ပြဲနေမယ် ၊ နှုတ်ခမ်းတွေ ဆုတ်ပြဲနေမယ်ဆိုလျှင်လည်း … kiss တစ်ခုကနေ ကူးပါသတဲ့လေ … ရှောင်ရှားကြပါ …
(ဒါတွေ ရေးပြလို့ ညစ်တီး ညစ်ပတ်တွေ ရေးနေတယ်လို့ .. ကြားအောင် တမျိုး မကြားအောင် တမျိုးရွာထဲ ဝေဖန်နေတဲ့ လူတွေ ရှိပါတယ်…သို့သော်လည်း …. လူတိုင်း သိသင့်သည့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စများဖြစ်လို့ … ရှောင်ရှားနိုင်အောင် အသိဖလှယ်တဲ့ သဘောနဲ့ … ရေးလိုက်ပါတယ် … နားနဲ့မနာပဲ ဖ၀ါးနဲ့ နာကြပါလို့ ………။ )
HIV virus cannot survives in Human saliva &
the possibility of infected through saliva is only 1 %.
( I am not so sure, but, I am not dare to ask my wife about it, Hee Hee )
ကိုနိုင်ငံခြားသားကြီးရေ .. ကျွန်မရေးတာ ပြန်ဖတ်ပါဦး တံတွေးက ကူးတယ်လို့ မပြောပါဘူး … အဓိက ထောက်ပြချင်တာ သွေးကပါ … ။ တချို့သောသူများ သွားတိုက်လျှင် သွားပွတ်တံကြောင့် သွားဖုံးတွေ ပွန်းပဲ့ယောင်ရမ်းနေတာမျိုး .. သွားကြားထိုးတံကြောင့် ၊ သွားပဲ့ ခြင်းကြောင့် သွားဖုံး ပေါက်ပြဲ သွေးထွက်နေတာမျိုး … အချင်းချင်းဆုံသွားလျှင် မခက်ပေဘူးလား … ။ တစ်ယောက်ကလည်း သွားဖုံးက သွေးယိုတာမျိုးဖြစ်နေမယ် ..တယောက်ကလည်း ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရှိမယ်ဆိုလျှင် … ကူးစက်နိုင်ချေ အများကြီးရှိတယ်နော် ….
lip kiss ဆိုတဲ့အထဲမှာ french kiss လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးထွက်အောင် နမ်းတာကို အဓိက ထား ပြောကြပါတယ် (ထန်တယ်လို့ ပြောရင် နည်းနည်း ရိုင်းပေမယ့် နားလည်လွယ်မယ် ထင်တယ်) တယောက်နှုတ်ခမ်း တယောက် ပေါက်ပြဲအောင် ကိုက်ကြတာကို ဆိုပါတယ်
နှုတ်ခမ်းအနာ၊ သွားဖုံး အနာတွေက တကယ် နာနေရင် သိပ် မနမ်းကြပါဘူး
ဗဟုသုတပေါ.ဗျာ ဆက်ရေး ကျနော် ရွှေဘိုက တောသားလေးက ဘာမှသိဘူးဗျ
နင်ကော င့ါကို ယုံလို့လား…
ငါ့ဟာ ငါတောင် ပိုး ရှိမ၇ှိမသေချာဘူးလို့လေ..
ဒါလောက်ပြောလို့ သဘောပေါက်ပြီး အဖော်သုံးခိုင်းရင်တော့ တော်ရဲ့…
ယုံတယ် ဒီအတိုင်းသာလာ ဆိုရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ…
ဒါဆို ကျွန်မကြောက်တယ် အနားမကပ်နဲ့ဆိုရင်လဲ သေပြီ ……
အော် ဒီမိန်းကလေး ဘယ်လို မိန်းကလေးလဲ …..
ဟိုးခေတ်က ရုပ်ရှင်ကားထဲကလို ကလေးလေးတစ်ယောက် သူ့ကြောင့်သေသွားလို့ ပြန်လျှော်ချင်လို့ ..မျိုးတောင်းတာလားမသိ…
သူ့မှာ ရှိနေမယ် ကောင်လေးတွေကိုလက်စားချေမယ် အပါခေါ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးလဲဖြစ်
( တွေးကြည့်တာနော်၊ အထင်သေးစိတ်မထားပါဘူး)
ဒါပေမယ့်သူတို့ကတခါမှမတွေ့ ဖူး ဘူး။
အဲဒီနေ့ ကမှတွေ့ တာ။
အဲဒီလိုကောင်မလေးမျိုး နဘန်6ချက် လောက်ရိုက်ပြီးပြန်လာရမှာ ဂျီကျစရာရှာလို့ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့
အီးကုံးတဲ့ လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ ရေမဆေးပဲ ထမင်းစားသလိုကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ (ရောဂါပိုးဝင်ဖိုခွင့်ပြုပေးလိုက်သလိုပဲ) ကာမမှာ မွှန်းနေတော့ဥာဏ်တိမ်တာ ရှိစေတော့ရှိစေတော့
အဓိက ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ အတော်ရုပ်ဆိုးတယ်..
သတ်ပုံကျတာမဟုတ်ဘူး…စာလုံးပေါင်းကိုမှားနေတာ…(စ)လုံးနဲ့ (ဆ)လိမ် စာရိုက်ရင် နေရာအဝေး ကြီးပဲ
(စောင်) က ခြုံတာ… (ဆောင် )က သယ်တာ ယူတာ ကိုယ်နဲ့မကွာ ထားတာ…မမှားသင့် ဘုးလို့ ထင်တာပဲ
မြင်ရတာ အတော် ကသိကအောက် နိုင်တယ် ..တစ်ယောက် ယောက် ပြင်ပေးကြပါလား ဟင်..
အော် … အဘဆွေကလည်း … စာရေးသူက အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးဖြစ်အောင် ရေးတာပါတဲ့ အဟီး အဲ့ဒီပစ္စည်းလည်း စောင်လို လုံခြုံအောင် သုံးလို့ ရသလို ..သွားလေရာ သယ်ဆောင်သွားလို့လည်း ရပါသတဲ့လေ ..
ဒါဆို လည်း မသိသေးတဲ့ အရာအတွက် ဗဟု သုတ ပေးတဲ့ ကိုမြွေဟောက်ကြီးကို ကျေးဇူး။
စုံ စုံ says:
ဒီလို ပညာပေး ပို့ စ်မျိုးလေးတွေ
ထပ်ဖတ်ရမယ် လို့ 
ခုလိုတင်ပေးတာကိုလဲ ကျေးဇူးပါပဲ ခင်ည ။